Isibuyekezo se-Yako Khasino 2021| 100% Up to R999+ 99 ama spin wa mahhala
Ikhaya / Amakhasino / isibuyekezo se-yako casino
Isibuyekezo se-Yako Casino
Isofthiwe:Big Time Gaming, Microgaming, NetEnt, NextGen, IGT (Wagerworks)
Ibhonasi Lokukwamukela:100% Ize ifike R999
99 Izikhathi Zokudlala Mahhala
I-Yako Casino iyindawo yokudlala esungulwe ngonyaka ka-2015. Isebenzisa ama-pulatifomu amaningi futhi iphathwa yi-EveryMatrix, futhi indawo yokudlala iyamukela abadlali abavela eNingizimu Afrika abangajabulela uhlu oluphelele lwemidlalo yasekhasino ngemali yezwe labo iZAR. “Yako” yigama lesiSwahili elisho “yakho” elikhombisa ubungane bekhasino kumakhasimende ayo.
Abadlali bangajoyina i- Yako Casino ngokushesha ngaphandle kokudawuniloda noma iyiphi isofthiwe noma i-app kuma divayisi abo edeskithophu nakumadivayisi eselula. Indinkimba esetshenziswa yisayithi yokugembula ihlanganisa okuphuzi nokubukhwebezane, imibala egqamile ezokwenza uzizwe ukhululekile futhi unamandla uma uqala ukudlala. Ngaphandle kwalokho, isikirini esibukeka kahle sizokwenza ukusesha kuwebhusayithi, ukuze ukwazi ukuthola kalula zonke izinto ozifunayo ezibandakanya imidlalo yasekhasino, amaphromoshini, izindlela zokubhenka nokunye. Lapho ufaka idiphozithi, uzonikezwa u-100% webhonasi yokukwamukela ize ifike ku–R999 nama-spin angu-99. Ukwenza izinkokhelo nokukhipha imali abadlali bangasebenzisa izindlela ezahlukahlukene zokubhenka ezibandakanya amakhadi esikweleti nawe-debit, amakhadi akhokhelwa kusengaphambili, ama-e-wallet nokudlulisa ngebhange.
Sesivele sakhuluma nge-slot yevidiyo i-Starburst okusho into eyodwa kuphela: lena yindawo lapho uzothola khona izihloko ezihamba phambili ezivela komunye wabahlinzeki besofthiwe abahlonishwa kakhulu, i-NetEnt. Lokhu kuyisiqalo sezinto ezinikezwayo njengoba kunabanye abahlinzeki abaningi ababamba iqhaza ngemishini yama-slot, imidlalo yetafula namakhadi kanye nemidlalo yabadayisi ababukhoma. Ngaphandle kwaleyo evela ku-NetEnt, abadlali bangajabulela imidlalo eyenziwa yi-NextGen, i-BoomingGames, i-Habanero, i-Play’n Go, i-QuickSpin, ukuqamba embalwa. Ngaphezulu kweqoqo lama-slot ajwayelekile nawevidiyo, i- Yako Casino iphinde inikeze uhlu olubanzi lwama-slot emali ekhula njalo (progressive) athandwa kakhulu ngabalandeli bama-slot njengoba enikeza ama-jackpot emali ekhula njalo ayenza isipiliyoni sokudlala sijabulise kakhulu. I-Mega Fortune evela ku-NetEnt ingenye yawo futhi uma unenhlanhla eyanele, ungashaya leyo jackpot ebiza ngaphezulu kwezigidi ezingu-30 ZAR nge-spin eyodwa. Zonke izinhlobo zemidlalo yetafula ingatholakala lapha futhi izindaba ezimnandi ukuthi ziyatholakala kumatafula edijithali nakumatafula abadayisi aphilayo, ngakho-ke kukuwe ukuthi iyiphi ozoyidlala.
Amaselula Asabenza- Yako Khasino (Android, Windows, Apple) :
iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 6, iPad 2, iPad (uhlobo lwesithathu), iPad (uhlobo lwesine), iPad Mini, iPod Touch (Uhlobo lwesithathu olune-A5 Dual Core chip). Samsung Galaxy S3, Samsung Galaxy S4, Samsung Galaxy S6, Samsung Galaxy S7, Google Nexus 4, Google Nexus 7, Samsung Galaxy Tab 2 7, Samsung Galaxy Tab 2 10.1.
VAKASHELA I-YAKO MOBILE CASINO
I-Yako Casino isebenza ngewebhusayithi yamaselula eheshayo elungiselelwe ngokuphelele ukudlala kumaselula. Noma ngabe usebenzisa i-Android, i-Apple noma i-Windows smartphone noma i-tablet, ungadlala imidlalo enhlobonhlobo yasekhasino eyenziwe ngobuchwepheshe be-HTML5 evumela abadlali ukuthi bayithokozele le midlalo ngokugcwele lapho bekhona.
Abadlali abasha bangasebenzisa iphakethe lokukwamukela eliqukethe u-100% webhonasi yokukwamukela ize ifike ku-R999 nama-spin angu-99. Bheka isigaba samaphromoshini lapho ungathola khona okunye okutholakalayo, njengezinselelo ze-slot, ukubuyiselwa kwekheshi masonto onke nokunye. Usizo lwamakhasimende oluthembekile lulungele ukukusiza uma uhlangabezana nanoma yiluphi uhlobo lwenkinga. Bangatholwa ngengxoxo ebukhoma, nge-imeyili, noma ngocingo nsuku zonke phakathi kuka-24:00 kuya ku-07:00 CET.
I-Yako Casino inikeza amakhulu emidlalo yasekhasino ehlinzekwa ngonjiniyela besofthiwe abangu-15 kanye nemidlalo yetafula emningi yabadayisi abukhoma esebenzisa i-Evolution Gaming. Yonke imidlalo iyatholakala kumodi yokudlala ngokushesha noma imodi yemali yangempela. Uhlobo lweselula lekhasino lunikeza iqoqo elibanzi lemidlalo yasekhasino futhi ungafinyelela kuyo ngqo kusuka kusiphequluli seselula yakho.
Uma ufuna indawo yokudlala enikeza izindlela eziningi zokubheja endaweni ephephile futhi eyamukela i-ZAR, i-Yako Casino yindawo okufanele ube kuyo. Bheka i- Yako Casino namuhla !!
IMIDLALO YE-YAKO KHASINO NOKUBHENKA
Izinhlobonhlobo Zemidlalo: Imidlalo Yetafula, Ama-slot, I-Poker Yevidiyo, I-Craps, Imidlalo Yabadayisi Ababukhoma.
Izindlela zokudiphozitha: Visa & MasterCard, Neteller, Skrill, ecoPayz, PaySafeCard ne-EntroPay.
Isungulwe: 2015 Inombolo Yocingo Yamahhala yase-SA: +0800981522
Umphathi ngu: EveryMatrix NV Casinos I-imeyili : [email protected]
Ilayisense ngeyase: Curacao Ingxoxo Esheshayo: Cha
Inguqulo Ongayidawuniloda: Cha Uszo lwe-24/7/365 Support: Yebo
Inguqulo Engadingi Ukudawunilodwa: Yebo Iwebhusayithi: Chofoza lapha ukuvakashela isayithi
I-Yako Casino Amabhonasi Okukwamukela
Ibhonasi Yomdlali Omusha: U-100% aze afike ku-R999 + Ama-spin Amahhala Angu-99 + u-10% wekheshi ebuyiselwe.
Yenza idiphozithi encane ka-R300 ukuthola ibhonasi yokukwamukela. Izidingo zokubheja ukuze ukhiphe imali zihlelwe ngo-25 webhonasi yakho oyiwinile. Unezinsuku ezingu-14 zokufinyelela kuzidingo zokubheja.
Ama-spin Amahhala: Yenza idiphozithi bese uthola iqoqo lama-spin amahhala.
Ukheshi Obuyiselwa NgoMsombuluko Njalo: Thola u-10% wekheshi ebuyiselwa wemali oyilahlekelwe ngesonto eledlule phakathi koMsombuluko neSonto.
Izinselelo ze-Slot: Vakashela isigaba samaphromoshini ukuze ufunde kabanzi ngezinselelo ze-slot eziqhubekayo ongazijoyina ukuze udlale imidlalo oyithandayo futhi uzuze isabelo sakho somklomelo.
Ikhasino Ebukhoma: Imidlalo yasekhasino engaphezulu kuka-60 esingathwe abadayisi ababukhoma nama-croupier azokunikeza isipiliyoni sekhasino yangempela.